Bridgefy Offline Messaging အပ်ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ? | Bridgefy
Bridgefy offline messaging အပ် အခြား မတ်ဆေ့အပ်တွေလိုဘဲ အလုပ်လုပ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်တွေ ဖုန်းလိုင်း (SMS)​ တွေမလိုအပ်ဘဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Android သို့မဟုတ် iOS အတွက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Bridgefy အပ်က အသုံးပြုရန် အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ Bluethooh လေးဖွင့်ရုံနဲ့တင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ! ပေ ၃၃၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀ မီတာ အတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြား Bridgefy အသုံးပြုသူတွေထံသို့ မတ်ဆေ့ပို့လို့ရနိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုချိန်ကလွဲလို့ အင်တာနက်ချိတ်မိနေစရာမလိုပါ။ ကျွန်ပ်တို့က ဒီအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို အသုံးပြုပြီး ဆော့၀ှဲလေးကို မျက်လှည့်လေးလို ဖွင့်လိုက်ပြီး အပ်ပလီကေးရှင်းကို အလုပ်လုပ်အောင်လုပ်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းက Airplane Mode မှာထားရင်တောင် Bluetooth လေးကိုဖွင့်ကာ အပ်ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အကျဥ်းချုပ်ပြောရလျှင် ၊ Bridgefy အပ်ကို အသုံးပြုရန် ဤအဆင့်လေးများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ( အပ်ကို ပထမအကြိမ် အသုံးပြုစဥ်သာလိုအပ်တာပါ။ သင်သည် ဤ အဆင့်ကို ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ကျော်နိုင်ပါသည်။)
၂။ Bluetooth ကို ဖွင့်ပါ။
၃။ အပ်ကို ဖွင့်ပါ။
၄။ Broadcast Tab ကို သွားကာ အနီးရှိလူများနှင့် မတ်ဆေ့များကို မျှ၀ေနိုင်ပါသည်။
သင့် သူငယ်ချင်းများကလဲ Bridgefy offline messaging အပ်ကို ဒေါင်းလုပ်ထားရပါမည်။
Bridgefy Offline Messaging အပ် သည် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သနည်း။
Bluetooth ကို အသုံပြု၍ “Broadcast” Tab ကို သွားကာ သင့်၏ စမတ်ဖုန်းသည် ပေ ၃၃၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀ မီတာ အတွင်းရှိ Bridgefy အသုံးပြုသူများ အားလုံးကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Chat Room ထဲကို သင်ရောက်ရှိသည်နှင့် သင့် အနီးတွင်ရှိသော သင့် Contact ထဲတွင်ပင်မရှိသော Bridgefy အပ် အသုံးပြုသူများအားလုံးကို စာပို့နိုင်ပါသည်! သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ် ၊ Music Concert များ ၊ အားကစားပွဲများ နှင့် လူအများအုပ်စုဖွဲ့ ဆန္ဒပြနေချိန်များတွင် သတင်းအချက်အလက်များ မျှ၀ေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ Device က အလည်မှာရှိတယ်လို့ မှန်းလိုက်ပါ။ Bridgefy က သင့် မတ်ဆေ့ကို့ လူအများကြီးဆီရောက်အောင် သင့်နားမှာရှိတဲ့ လူအားလုံးကို စာပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Feature ကို “Broadcast” Tab မှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို မြန်ဆန်စွာ လူအများကြီးထံ ရောက်ရှိဖို့ ဒီ Broadcasts ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Bridgefy Offline Messaging ကို မည်သူများ အသုံးပြုနေသနည်း။
ကမ္ဘာတစ်၀န်းရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာသည် ဤ Bridgefy အပ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားကြပါသည်။ သူတို့သည် များစွာသော အခြေအနေများတွင် အသုံး၀င်ကြောင်းသိရှိသွားကျပါသည်။ ဥပမာ မက္ကဆီကို နှင့် အီရန် တွင် သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နေချိန် ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဂီတပွဲတော် (Music Festivals) များ ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံများတွင် ဆန္ဒပြနေချိန်များ အပြင် ကျောင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနေပါသည်။ လူအစုအဝေး ကြားတွင် အချင်းချင်း အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိနေအောင် မည်သို့ အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းကို Forbes တွင် Bridgefy အပ် အကြောင်းရေးသားထားသော ဆောင်းပါးလဲရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများထံမှ ရရှိထားသော ၀ေဖန်အကြံပြုချက်များ ရရှိထားသောကြောင့်လဲ အလွန် ၀မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့သည် သူတို့၏ မိသားစုများကို ရှာဖွေရန်မည်သို့ အထောက်အကူဖြစ်သည်နှင့် သူတို့၏ မိသားစု၀င်များကို မည်ကဲ့သို့ လုံခြုံအောင်ထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တိုအား ပြောပြထားပါသည်။ Bridgefy သည် သင့်အား မည်သို့ အသုံး၀င်စေသနည်း?
နောက်ထပ် မေးစရာ မေးခွန်းများရှိပါသေးသလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ FAQ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Bagaimana cara kerja Aplikasi Bridgefy?